musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » 65% yevafambi vendege vekuUS vanotsigira mapasipoti ekudzivirira
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
65% yevafambi vendege vanotsigira Vaccine Passport
Kana iyo FAA ikafunga kuita chirongwa chekudzivirira pasipoti, vangangoita mumwe muvashanyi gumi angarambidzwa kukwira mundege.
44% yevaRepublicans vakati vaizotsigira chinodiwa nehurumende kuti vape humbowo hwejekiseni kuti vabhururuke.
48% yeRepublicans yaizotsigirawo mvumo yakananga kubva kunhandare dzendege.
95% yevaDemocrat vaitsigira chero hurumende kana yekutengesa ndege yekudzivirira pasipoti.
Sezvo marita akasiyana-siyana achikwira, vangangoita makumi matanhatu neshanu muzana emapepa anogara achitaura kuti pasipoti yekudzivirira ichawedzera kuvimba kwavo mukuchengetedzeka kwekufamba nendege, maererano neshumo nyowani. Nepo makumi mapfumbamwe kubva muzana emapepeti anowanzove akabayiwa zvakakwana kana zvishoma kubatira hutachiwana, angangoita mumwe chete pagumi anogara achiramba kubayiwa jekiseni.
Idzi nhamba dzinokurudzira nekuti kazhinji mapepa anowedzera majekiseni. Nekudaro, kana iyo FAA ikafunga kuita a chirongwa chekudzivirira pasipoti, vangangoita mumwe chete muvashanyi gumi angarambidzwa kukwira mundege.
Ongororo iyi yakaitwa pachishandiswa Frequent Flyer Database, iyo inosanganisira vanopfuura mazana maviri ezviuru vanosarudza-kupinda mumapepa anowanzoitika kubva kuUnited States. Vanenge 200,000% yevaongorori vatori vechikamu vane makore anopfuura makumi matanhatu-ekuberekwa, vachivaisa muchikwata chiri panjodzi yekurwara zvakanyanya kubva kuCOVID-65.
Indasitiri yekufambisa ndiyo imwe yeakanyanya kurohwa panguva yedenda, nezvirambidzo zvinomanikidza kufamba uye kushanya kuti zvimiswe zvinotyisa. Kudzorera kwave kunonoka. Mune 2020 Frequent Flyer Survey, 60% yevakabvunzwa vakati vane hurongwa hwekufamba mumwedzi mitanhatu inotevera. Asi zvakadaro mumushumo wegore rino, 36% yevakabvunzwa vakati havana kufamba kubva munaNdira 2020.
Asi kuda kwekufamba kuri kuwedzera. Vanoda kusvika 70% yevakabvunzwa vakati vane hurongwa hwekufamba nendege mumwedzi mitanhatu inotevera, ne72% yeavo vafambi vachironga nzendo dzega.